काठमाडौं अब ‘नोमाक्स सिटी’- विद्यासुन्दर शाक्य, मेयर, काठमाडौँ महानगरपालिका
Monday, 29 May, 2017 5:59 PM
कांग्रेसका राजुराज जोशीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा भारी मतअन्तरले पराजित गर्दै नेकपा (एमाले) तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले बागदवारको कुर्सी आगामी पाँच वर्षका लागि सम्हाल्ने भएपछि अहिले त्यसको सर्वत्र चर्चा भएको छ । दुई पटक वडाअध्यक्ष भइसकेका शाक्यलाई यो पटक भने अब पाँच वर्षभित्र महानगरलाई कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । मेयर पदमा निर्वाचित शाक्यसँग दृष्टिका लागि गरिएको कुराकानीः
कांग्रेसका राजुराज जोशीलाई भारी मतले पराजित गर्दै मेयर निर्वाचित हुनभयो, खुशी हुनुहुन्छ होइन ?
निर्वाचन भनेको हारजितको मैदान हो । निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएपछि हार–जित दुबैलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । जहाँसम्म खुशी–बेखुशीको कुरा छ, जितमा खुशी हुनु स्वाभाविक हो । मैले यो जितलाई सारा काठमाडौं महानगरवासीको जितका रुपमा लिएको छु । म मेयर पदको उम्मेदवार बन्दा कुनै एक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि थिएँ । अब म सबै महानगरवासीको प्रतिनिधि हुँ । म यही ढंगले काम गर्ने छु । मेरो जिम्मेवारी पनि यही ढंगले अघि बढ्ने छ । महानगरको विकासका लागि सबै दलसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने छु । प्रतिद्वन्द्वीहरुको मतको सम्मान गर्नु पनि मेरो दायित्व हो । म बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह महानगरलाई हाँक्ने मनस्थितिमा छु । किनभने स्थानीय निकाय भनेको लोकतन्त्रको जग हो । स्थानीय निकाय बलियो भयो भने त्यसले स्थानीय तहका जनताको मनोबल उँचो बनाउँछ । जनताको मनोबल उँचो हुनु भनेकै विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ देश अगाडि बढ्नु हो । अर्को कुरा संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अनिवार्य थियो । त्यसका लागि देशैभर एकै पटक निर्वाचन हुनुपथ्र्यो । तर, जे भए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि जेठ ३१ गते सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै देशले स्थायी शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्छ ।
निकै ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
म पहिलो पटक नजनिर्वाचित प्रतिनिधि भएको भने होइन । म २० वर्षअघि पनि वडाध्यक्षमा निर्वाचित भई जनताको सेवा गर्ने जुन अभिभारा पूरा गरेको थिएँ, आज झन् फराकिलो क्षेत्र र लाखौं जनताको मायाले माथिल्लो जिम्मेवारी प्राप्त भएको मात्र हो । यसमा सबै भन्दा बढी खुशी लागेको छ । सबैभन्दा पहिला मलाई अमूल्य मत दिएर निर्वाचित गर्नुहुने आम मतदातालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरजस्तो गरिमामय पदमा योग्य ठान्ने मेरो प्यारो पार्टी नेकपा एमाले, पार्टी कार्यकर्ता, शुभचिन्तक एवं सबै नेपाली आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा पनि म कृतज्ञता ज्ञापन गर्नैपर्छ, जसका कारण म यो जिम्मेवारीमा छु ।
मैले मेरो विजयलाई नेकपा (एमाले) ले अगाडि सारिरहेको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सामाजिक न्याय र सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, संविधान कार्यान्वयन, बलियो स्थानीय सरकार तथा समृद्ध एवं समुन्नत नेपाल निर्माणको परिकल्पनाको जनअनुमोदनका रूपमा ग्रहण गरेको छु । त्यो कुरा मैले भाषणमा होइन, व्यवहारमै देखाएर छाड्ने छु ।
महानगर त्यसमा पनि नेपालको राजधानी काठमाडौंको मेयर निर्वाचति हुनुभएको छ। योजना त धेरै होलान् नि, कस्तो महानगर बनाउने सोच बुन्दै हुनुहुन्छ ?
म एक्लैले सबै कुरा गर्न सम्भव छैन । टिममा काम गर्ने हो । मेरो टिममा अनुभवी योजनाकार छन् । म टिम परिचालन गरेर अघि बढ्ने छु । ‘एक सय दिनका एक सय एक काम’ मैले सार्वजनिक गरिसकेको छु । मैले त्यसैबेला पनि काठमाडौँ कस्तो बनाउने भन्ने योजना प्रस्तुत गरेको थिएँ । मैले जुन घोषणपत्र लिएर जनताको घर–दैलोमा पुगेँ । त्यही अनुरुप नै म काम गर्ने छु । मैले बोल्नका लागि मात्र बोलेको होइन । त्यसैले सपथ लिएको दिनदेखि नै म मेरा कार्ययोजना कार्यान्वय गर्न लाग्ने छु ।
मेरो कार्यकालमा काठमाडौं चौबिसघन्टे ‘जीवन्त सहर’ हुनेछ । वर्षौंदेखि अड्किएको तीनकुनेको जग्गामा अत्याधुनिक पार्क बन्नेछ । सम्पूर्ण ट्राफिक लाइटले काम गर्नेछन् । क्लिन द सिटी अभियानको प्रारम्भ धुवाँधुलो न्यूनीकरण गरी ‘नो मास्क सिटी’ हुनेछ । कार पार्किङ मलको नीति बनाई कार्यप्रारम्भ र स्मार्ट भर्टिकल कार पार्किङ नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नेछु । भक्तपुरको हनुमन्तेदखि कटवाल दहसम्म बागमती किनार हुँदै केबल बस गुडाउने योजना छ । मेरो कार्यकालमा त्यसलाई पनि पूरा गर्ने छु ।
धरहरा प्रिमिसेसको मास्टर प्लान बनाई कार्यान्वयन हुनेछ । महानगरका विशेष स्थान भेहिकल फ्रि र वाईफाई फ्रि जोन घोषणा हुनेछन् । महानगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकारबाही भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन इ–गभर्नेन्स प्रणालीलगायत काम हुनेछन् ।
सडक, ढललगायत परम्परागत कामलाई निरन्तरता दिइने छ । ट्राफिक समस्या हटाउन पार्किङ मल निर्माण गरिने छ । मोनो र मेट्रो रेलका काम हुनेछन् । मोनोरेलका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको केही महिना अगाडि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको खबर बाहिर आएको थियो । सुन्दैछु, त्यस विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यस विषयमा बुझेर यथाशक्य चाँडो महानगरवासीको चाहना पूरा गर्ने छु । किनभने महानगर भनिए पनि त्यस अनुरुपको सार्वजनिक सवारी साधन हामीकहाँ छैन । मनोरेल वा मेट्रो जे सम्भव हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने लाखौं सर्वसाधारण जनताले दुःख पाउने छैनन् । वातानुकूलित सार्वजनिक साधनमा महानगरवासीले यात्राको आनन्द लिन पाउनेछन् । यो मेरो प्राथमिकताको विषय हो । मेरो कार्यकालमा काठमाडौं सुरक्षित, २४ सै घन्टा खुला, जीवन्त र सुन्दर सहर हुनेछ । मेरो थोरै बोल्ने धेरै काम गर्ने बानी छ । त्यसैले म अब काठमाडौंलाई विश्वका अन्य देशसँग तुलना गर्ने होइन, अन्य देशका सहरले अब काठमाडौंजस्तो भनेर तुलना गर्ने महानगर बनाउनेछु ।
अरु थप योजना पनि त होलान् नि ?
निश्चय पनि देशको राजधानीसमेत भएकाले काठमाडौंलाई विश्वको आकर्षणको केन्द्रबिन्दुका रूपमा यसलाई विकास गर्न जरुरी छ । अब म आर्थिक तथा सामाजिक न्यायमा आधारित नमूना सहर बनाउनेछु । काठमाडौं सहरलाई सहयोग गर्ने वा लगानी गर्नेलाई आकर्षित तथा व्यापारमैत्री वातावरण बनाउनेछु । धुवाँ–धुलो नियन्त्रण गर्नेछु । अस्तव्यस्त सहरलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रविधियुक्त यातायात पद्धति स्थापना गर्न जोड दिनेछु । अघि पनि मैले भने– महानगरमा केबलकार, मोनोरेल मेट्रो तथा अत्याधुनिक बस सेवा, इलेक्ट्रिकल भेहिकल तथा स्मार्ट गाडी सञ्चालनमा ल्याउनेछु । महागनरलाई ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास गरिनेछ । महानगरको झल्को दिने गरी ‘पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन’ सेवा कम्तिमा दिनको २० घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछु । त्यसैगरी महानगरभित्रका सबै टोल–टोलमा पुग्न कुनै पनि स्थानबाट ५ मिनेटभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरी ‘पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’को व्यवस्था गर्नेछु । त्यसैगरी साइकल लेनको निर्माण गर्नेछु । पब्लिक ट्रान्सपोर्टको कुरा गर्दा वातावरणलाई ध्यान दिएर सम्भव भएसम्म इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्राथमिकता दिनेछु ।
साइकल चढ्नेलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनेछु । ठाउँठाउँमा साइकल पार्किङ स्टेसन निर्माण गर्नेछु । काठमाडौं महानगरभित्र ‘स्मार्ट पार्किड सिस्टम’को व्यवस्था गर्नेछु । विभिन्न ठाउँमा स्वचालित ‘भर्टिकल कार पार्किङ र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सिस्टम’को व्यवस्था गर्ने योजना छ । यसका लागि मेरो जितपछि नै डीपीआर तयार पारी दुई वर्षभित्र मेट्रो रेल र मोनोरेल सञ्चालन हुन्छ । काठमाडौंको खानेपानी समस्या समाधान गर्न बृहत्तर योजना बनाएर अघि बढ्नेछु ।
काठमाडौँ कुरुप भयो, पार्कहरु छैनन्, सार्वजनिक जग्गाहरु त्यत्तिकै छन् भन्ने पनि छ, यसबारे नि ?
हो, यो महानगवासीको ठूलो समस्याका रुपमा यो देखिएको छ । अब मेरो कार्यकालमा यसले मूर्तरुप पाउने छ । काठमाडौं महानगरभित्रका सबै सार्वजनिक जग्गा अब संरक्षित हुनेछन् । स्थानीय बासिन्दाकै सहयोगमा ती क्षेत्रमा पार्क निर्माण हुनेछन् । मैले मेरो घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरको छु । तीनकुनेको जग्गाको समस्या समाधान गरी अत्याधुनिक पार्क निर्माण हुनेछ । महानगरका सरकारी र सार्वजनिक ठाउँलाई ‘बाउन्ड्रीलेस गार्डेन’का रूपमा विकास गर्नेछु । नदी किनारमा रहेका मठमन्दिर संरक्षणसहितको बाग्मती, विष्णुमती र रुद्रमती संग्रहालय निर्माण हुनेछन् । ऐतिहासिक महत्व बोकेको सोह्रखुट्टेको पुनःस्थापना प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । महानगरपालिकाभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय केन्द्र जस्तै स्वयम्भू, पशुपति, बौद्ध, वसन्तपुरलगायत स्थानमा द्रूत गतिको निःशुल्क वाईफाई क्षेत्र बनाइनेछ । यसका लागि छिमेकी नगरपालिका र महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । काठमाडौं महानगर र चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सहकार्यमा सटल बसको व्यवस्थासहित सहिद स्मृति पार्क र पृथ्वीनारायण स्मृति संग्रहालय सहितको युवा पार्क निर्माण हुनेछ । साइकल सिटी महानगरको कार्ययोजना प्रारम्भ हुनेछ, जसले आसपासका नगरलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । महानगर र गोकर्णेश्वरको समन्वय र सहकार्यमा ‘तारेभीर परियोजना’ को प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । टोखा नगरपालिकासँग समन्वय र सहकार्य गरी टोखाको संस्कृति सम्पदा संरक्षण, प्रवद्र्धन एवं झोरस्थित बाणेश्वर ‘वाटरफल पार्क’ बनाउने काम हुनेछ । ललितपुर महानगर र गोदावरी नगरसँग समन्वय गरी हाल ललितपुर महानगरपालिकामा भएका शिल्पकारहरूको ‘नयाँ ललितपत्तनम’ नामको आर्ट एन्ड क्राप्ट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सबै काम पूरा गर्न त समस्या होला नि ?
समस्या हुन्छ । समस्या हुन्छ भनेर भाग्ने कुरा त भएन नि । यी सबै समस्यासँग लडेर अघि बढ्ने क्षमता मसँग छ । मैले एमालेका तर्फबाट महानगर राजनीतिक संयन्त्रको प्रतिनिधिका रूपमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु । यसले मलाई महानगर बुझ्न निकै सजिलो भएको छ । महानगरको विकास कसरी गर्ने, महानगर विकासमा के कुराको कमी छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला मृतअवस्थामा रहेका सपनालाई ब्युँझाउने काम भएको थियो । नेपाली जनताले देखेको समृद्धिको सपना पूरा गर्न महानगरपालिकामा एमाले बाहेकको नेतृत्वले सक्दैन भन्ने जनताको आशा र भरोसालाई मर्न नदिई काम गर्ने छु । मेरो कार्यकालमा महानगर साँच्चैको महानगर बन्ने छ ।